Sida loo bedelo qiyaasta map - Geofumadas
Beddelida saadaasha khariidada
Febraayo, 2008 Cartografia, Microstation-Bentley
Ka hor inta aynaan arkin sida loo sameeyo iyadoo leh AutoCADMap 3D, maxaa dhacaya haddii aan sameyno iyada oo la adeegsanayo Microstation Goegraphics. Miyaad dareentaa, tani laguma samayn karo AutoCAD caadi ah, ama keliya oo leh Microstation.
Codsigan waxaa loo adeegsadaa iyada oo la adeegsanayo qalab / nidaam / iskudubarid nidaam. Qeybtaani waxay u muuqataa, qalabyada ay u leeyihiin howlgalo la jaan qaadaya; waxaanu isticmaali doonaa saddexda koowaad ee udubdhexaadka ah iyo in wax laga beddelo qiyaasta khariidada. Qodobka afaraad waa in la abuuro weelka shidaalka iyo kan ugu dambeeya si uu u canugo duulimaadka.
1. Qaybi qiyaasta.
Xaaladdayda, waxaan rabaa inaan ku meeleeyo qiyaasta UTM, oo leh xogta WGS84 (NAD83), xadka 16 North. Si loo furo guddiga waxaan ku cadaadineynaa icon ugu horeyn illaa iyo inta uu kashaqeynayo, kaas oo aan ku jiidi karno dhinacyada:
Waxaan isticmaalnaa badhanka koowaad (badalaad) si loo qoondeeyo saadaalinta, ka dibna dooro Naqshad Sare, Dhamaan Wareegaha Guud, Dhatum WGS84 iyo cutubyo mitir. Dhinaca midig, aagga kiiskan waa 16 oo ku yaal waqooyiga dhexe, ayaa la doortaa, sidaa darteed isbeddelka ayaa lagu dabaqayaa, badhanka saddexaad (badbaadiye master) ayaa la doortaa.
2 Xulo saadaalinta tixraaca
Tani waxaa loo isticmaali doonaa icon labaad, riixaya moodada ilaa ay ka kooban tahay kulankan:
Xaaladdan oo kale, waxaan u beddesho aan map in ay wadataa juquraafi, sidaas darteed waxaan dooro badhanka toddobaad, ka dibna adiga oo riixaya badhanka labaad (edit tixraaca) si ay u qotomiyey, doorashada caadiga ah qiyaas / juqraafi (loolka / dhigaha), iyadoo la isticmaalayo Datum isla wgs84 iyo unugyada in ay degrees. button afraad waxaa ka dibna aad codsatay, (Reference mooyee).
3. Isbedelka ha sameeyo
Tani waxaa lagu sameeya qalabka furaha saddexaad ee guddi-kowaad.
Haddii aan rabno inaan bedelno faylka oo dhan, waxaan dooranaynaa ikhtiyaarka koowaad (isbedel dhammaan)
Haddii aad rabto inaad sameyso oo keliya xayndaab, waa inay noqotaa mid firfircoon oo xulashada labaadna la doorto (isbeddelka weelka)
Haddii aad rabto inaad wax ka bedesho oo kaliya shayada qaar, dooro saddexaad (isbeddelka element),
Kuwa soo socda ayaa ah inay bedelaan faylasha ASCII-qaabka
Iyo ugu dambeyntii waa in la beddelo faylal kala duwan (shibbane).
Marka xulashada la doorto, guji shaashadda.
Post Previous«Previous Mabaadii'da 7 ee qaabka loo yaqaan 'multilayer model'
Post Next 7 dabeecadaha dabiiciga ah, oo sii waday korodhkaNext »